Amarkii ugu cuslaa ee Bin Ladin uu siiyo waardihiyiisii gaarka ahaa muxuu ahaa? – SBC
Amarkii ugu cuslaa ee Bin Ladin uu siiyo waardihiyiisii gaarka ahaa muxuu ahaa?
Nasser al-Bahri oo ka mid ahaa ilaalada gaarka ah ee hogaamiyaha shabakada Al-qaacida Osama Bin Ladin, isla markaana sida gaarka ah ugu qaabilsanaa ilaalinta aadkana uu ugu kalsoonaa ayaa wareysi uu bixiyey wuxuu kaga hadley amarkii ugu cuslaa uguna yaabka badnaa ee uu siiyo Osama.
Goormuu Al-Bahri noqdey waardiyaha gaarka ah ee Bin ladin
Sidee isku arkeen
Muxuu ahaa amarkii uu sida gaarka ah u amrey
Muxuu ka sheegay Bin Ladin waxyaabihii uu aadka u jeclaa
Muxuuse soo xusuustey markii uu maqley geerida Bin Ladin
Nasir oo wareysi siiyey wargeyska Daily Mirror ayaa sheegay in Osama uu ku amray in hadii la isku dayo la qabto oo ay ciidamadu Mareykanku qaban rabaan oo dilo ka hor inta aan la qaban.
“Wuxuu igu yiri, hadii Mareykanku isoo helaan ama ay i qabtaan, dhab ahaantii ma doonayo inaan u noqdo maxbuus Mareykanka, marka waxaan ku amrayaa inaad i disho aniga ka hor inta aanay i qaban” ayuu yiri Nasser al-Bahri oo ka sheekaynayey sheekadan oo uu xusey inay dhexmartey isaga iyo Bin Ladin sanadkii 1998-kii, xiligaasi oo ay ku sugnaayeen buuraleyda Afgaanistaan.Al- Bahri wuxuu sheegay in Bin Laden uu ku yiri “Waxaan ka jeclahay in laba xabadood madaxa iiga dhacaan ka hor inta aan la ii qaban maxbuus oo aan ku dhinto anigoo Shahiid ah, laakiin xaqiiqdii maya inaan noqdo maxsbuus”. Al-Bahri, oo 39 sano jir wuxuu Osama Bin Ladin al soo shaqeynayey mudo 6 sano ah waxaana uu ahaa ilaaliyaha gaarka ah ee Bin Ladin isagoo loo yaqiin magaca “Abu Jandal” ama dilaagii (The Killer).
Markii aan maqley geerida Bin Ladin waxaan soo xusuustey hadalkii uu i dhihi jirey, waxaan niyada iska iri wuxuu helay riyadiisii, waan ku faraxsanahay inaan sameyn dalabkiisii” ayii yiri Al-Bahri oo ka hadlayey sida uu dareenkiisu noqdey markii uu maqley warka geerida Osama Bin Ladin.
Al-Bahri oo u dhashay wadanka Yemen wuxuu sidoo kale ka mid ahaa dadkii Osama Bin Ladin la dooray xaaskiisa Yemen u dhalatey ee lagu magacaabo Amal al-Sadah. Sanadkii 2000 ayuu Al-Bahri wuxuu si lama filaan ah ku tagey wadanka Yemen waxaana isla sanadkaasi magaalada Cadan ee dalka Yemen lagu qarxiyey markab dagaal oo Mareykanku leeyahay oo lagu magacaabi jirey USS Cole kaasi oo ay ku dhinteen 17 askari oo Mareykank ah.
Dawlada Mareykanka ayaa ka dalbatey xukuumada Yemen in la qabto oo loo soo gacan gaiyo Al-Bahri (Waaridihii Bin Ladin), laakiin way diidey waxaana ay sheegtey inay maxkamad soo taagayso, iyadoo maxkamad la saarey. 2 sano ka dib oo aheyd sanadkii 2002-dii ayaa maxkamad ku taal wadanka Yemen waxay sheegtey in Al-Bahri aanay ku hayn wax dambi ah iyo in uu ka mid yahay Al-qaacida waana la siidaayey, balse xabsi guri ayaa la galiyey.
Al-Bahri inkastoo uu yahay muwaadin Yemeni ah hadana wuxuu ku dhashay wadanka Sacuudiga wuxuu sheegtaa inaanu ka mid aheyn Al-Qaacida basle wuxuu sheegay in uu aad u jecelyahay fikradaha ay aaminsan yihiin oo uu taageersan yahay.
Al-Bahri wuxuu ka sheekeeyey waxyaabihii uu ka yaqiin sida gaarka ah Osama Bin Ladin wuxuu sheegay in Sheekhu uu aad u jeclahaa fardaha, isagoo sheegay in faras kasta oo uu arko oo uu jeclaado in uu iibsan jirey, sidoo kale wuxuu sheegay in Bin Ladin uu aad u jeclaa malabka oo uu sheegi jirey in uu daawo yahay.
Al-bahri wuxuu yiri Bin ladin wuxuu jeclaa in uu salaado tukado ka hor inta aanu bilaabin hawlmaalmeedkiisa, wuxuu kaloo ahaa nin wax qora oo qoraal sameyn jirey, wuxuu sheegay in kulmada ka hor uu salaad tukan jirey.
Bishii September sanadkii 2009-dii wareysi Al-Bahir uu siiyey wariye lagu magacaabo Michelle Shepherd oo ka tirsaneyd Wargeyska Toronto Star ee ka soo baxa wadanka Canada wuxuu ku sheegay inaanu xubin ka aheyn Al-Qaacida balse uu wali taageersan yahay fikradahooda.
Al Bahri oo qaba cudurka sonkorowga ama Diabetes wuxuu ku sheegay wareysiga uu siiyey wariye Michelle Shepherd in leeyrta jihaadka ay ku biday isagoo yar xiligaasi oo uu sheegay in uu arki jirey dagaalyahankii ajanabiga ahaa ee ka qayb qaadanayey dagaalkii Midowgii Sofiyeeti ee duulaanka ku qabsdey wadanka Afgaansitaan.
Al-Bahri wuxuu sheegay in sanadkii 1994-kii uu aaday wadanka Bosnia si uu gacan siihyo xoogagaii Muslimiinta ee dagaalka ku jirey, isagoo sidoo kale ku sheegay wareysigaasi in uu safaro ku tagey wadamada Soomaaliya & Afgaansitaan isagoo sheegay markii uu tagey Afgaanistaan in uu la kulmay Bin Ladin uuna u noqdey Ilaaliye ama waardiye.
Nasser al-Bahri waxaa dawlada Yemen u dirtey xarun ay sheegtey in lagu dhaqan celiyo dhalinyarada ay madax martey Jihaadka sida ay sheegtey
Laakiin sheekada qosolka leh ee Nasser al-Bahri uu ku xusey wareysiga uu siiyey wargeyska Daily Mirror wuxuu sheegay in sanadihii sagaashameeyadii uu kubada cagta aad u xiiseyn jirey, wuxuu tibaaxay in uu uu taageero u ahaa kooxda Arsenal ee ka dhisan magaalada London, wuxuu sheegay in uu jecelaa qaab dhismeedka kooxda gaar aaan qaabka ciyaartooda. Al-Bahri haatan wuxuu isaga nool yahay nolol iska kooban waa Tagsiile bariiskiisa dhacdsada waxaa kaloo uu dhigtaa College isagoo barta Human Recource, wuxuu qorey buug uu la kaashaday saxafi Faransiis oo lagu magacaabo Georges Malbrunot, buugaasi oo laguy magacaabo Shadow of Bin Laden (Hooskii Bin Ladin).
Halkan ka eeg qoraalkii wargeyska Daily Mail oo Englihs ah: http://www.mirror.co.uk/news/top-stories/2011/05/04/osama-bin-laden-s-bodyguard-i-had-orders-to-kill-him-if-the-americans-tried-to-take-him-alive-115875-23105618/
Marka hore salaamu laahi waxan ushegayaa mujahidka albahri inuu hawshisa sii wato waayo wuxu cagta saaray wadadi saxda ahayd hadana u wardiye u ahaa usama biladi raximahulah qofka kastana wajib ku tahay hadu awodo wadadas
waaa qiso fiican aad baan oooga helay